Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 55
Inona no dikan'ny fofona; manao ahoana izy io? Moa ve ny singa ara-batana dia manomboka amin'ny famokarana ny fahatsapana, ary inona ny ampahany mahatonga ny fofona amin'ny fiainana?
Ny antsoina hoe fofona dia fiheverana ny fananana zavatra sasany. Ireo olona ireo dia mihetsika amin'ny alàlan'ny fofonaany, avy amin'ny fivoaran'ny olivazy. Ny nerve dia mampita ny singa malemy, izay ao amin'ny zavatra hita maso, mankany anaty sampana iray ao amin'ny vatan'olombelona. Io olona io dia ny fahatsapana ny toetoetran'ilay zavatra amin'ny alàlan'ny fampahalalana azony amin'ny alàlan'ny fofon-fofona manitra. Ny firotsahan-javatra dia singa, matoatoa va ny kilasin'ny gadona an-tany. Ny singa mamofona dia mifamatotra ary iray amin'ireo zavaboary izay miditra amin'ny lalàm-panorenana sy ny firafitry ny maha-olombelona. Ny singa mamofona dia ny singa amin'ny tany, ary noho io antony io dia afaka mahita ireo toetran'ny tany, izay asehon'ny zavatra ara-batana. Ka ny valin'ny fanontaniana hoe "Inona no dikan'ny fofona ary ahoana no ahaizany?" fa izy io dia zavaboary, singa iray ao anatin'ny elanelan'ny olombelona ao amin'ny vatana ara-batana, izay singa manitra no mahatsapa ny toetran'ny toetra sasany amin'ny vatan'olombelona, ​​izay antsoina hoe fofona na fofona.
Ireo toetra ireo dia tsy hitan'ny fofona fotsiny. Ireo fofona rehetra dia manao izany. Ny fofona dia sakafony, izay mamelona sy mikolokolo azy. Mahafantatra ireo toetra sy toetran'ny singa ivelan'ny tany izy. Ny fofona dia ny tsy hita maso ary sangan-tany malefaka, izay miditra ao amin'ny lalànan'ny fofona manitra ary toy izany hatrany amin'ny maha-olombelona.
Ny singa ara-batana amin'ilay zavatra izay hita amin'ny fofony dia miditra amin'ny famokarana ny fofona manitra. Tsy ireo sombin-javatra izay an'ny zavatra ara-batana ihany fa ireo singa hafa amin'ny singa eto an-tany ihany koa izay nivezivezy tamin'io zavatra io, no nahatonga ny fofona fofona. Ny elan-tany dia toy ny tondradrano, mikoriana miverina ao anatin'io zavatra io. Ny fantsona dia avy amina singa tsy hita maso ary tsy hita maso izay toa sanganasa mifangaro; fa raha ny fahatsapana ny fijery anatiny no manitikitika ny saina ary afaka mamakafaka ny onjan-tsaina ny saina, dia hoheverina ho singa maromaro ny fikorianany.
Rehefa mifandray ny rivotra iainana ara-batana ny fofona ara-batana - ilay rivotra namboarina avy amin'ilay singa nateraky ny fofonaina dia hita ao amin'ny haben'ny fofona manitra. Ny fofona dia toetra mampiavaka ny zavatra hita. Ny zavatra ara-batana tsirairay dia manana ny toetoetra ara-batana tsy manam-paharoa, izay misy miato sy mivezivezy. Fa vitsy ny zavatra azo fofona. Ny antony dia tsy nampiofanina sy tsy ampy tsara ilay fomba fiheverana ny fofona. Rehefa voaofana ny fofona fofona, toy ny an'ny jamba, maro ny zavatra azo fofona manitra izay mazàna ho tsy maimbo amin'ny ankapobeny.
Mbola misy fofona mahaliana, fahatsapana anaty, izay mety ho novolavolaina ary efa novolavolain'ny olona sasany, izay ahitan'ny fofona zavatra tsy ara-batana. Ny zanaky ny tontolo hafa dia mety hampahafantatra ny tenany fa tsy fofona ara-batana izany.
Ny anjara asan'ny fofona amin'ny fiainana dia ny fanampiana manitra amin'ny fikojakojana ny fiainana. Ny fofona hanina dia mampivonto ny ranon-tsinay ary mandrisika azy ireo, toy ny fahitana latabatra efa namboarina. Biby hita amin'ny alàlan'ny fofona mamofona izay ahitan'izy ireo sakafo ny biby. Hitan'izy ireo ny fisian'ireo fahavalo sy loza ateraky ny fofona.
Raha toa ny olona ankehitriny dia mamelona amin'ny alàlan'ny fidiran'ny sangan'asa izay entin'ny rafiny avy amin'ny sakafo ara-nofo izay laniny, dia amin'ny ho avy, rehefa voafehin'ny olona tsara kokoa ny vatany, dia azo atao ny maka azy amin'ny alàlan'ny fahatsapana fofona ny votoaty ananany ankehitriny amin'ny alàlan'ny fandevonan-kanina ny sakafo ara-batana. Ny singa fofona mamony dia ariana amin'ny famelomana ny vatany. Ny fahatsapana ny tsiro sy ny fofona roa kosa, dia tsy maintsy ovana lehibe amin'ny fepetra izay misy azy ireo ankehitriny alohan'ny hamokarana amin'ny fofona fotsiny. Avy eo, ny singa malemy ara-batana izay hoentin'ilay singa mamofona.
Inona ny fisainana? Ahoana no ahafahana mamboly sy ampiasaina?
Ny fisainana an-tsaina dia ny toe-tsaina izay iasan'ny foiben'ny fakana saina manome endrika ho an'ny foto-kevitra eritreritra izay noforonina ny fakantsary motifika ary izay noheverin'ireo mpampianatra fakana toerana. Ireo fahaiza-miaina telo ireo dia mifandray mivantana amin'ny eritreritra. Ny fakantsary efatra efatra dia miahiahy mivantana. Ny mpampianatra maizina dia manelingelina ny eritreritra, toy ny amin'ny asa an-tsaina rehetra, ary noho izany dia tsy maintsy ao amin'ny fanjakana izay ny fifehezana maizina mba hamelana ny asan'ny eritreritra. Ny fakantsary ny fotoana dia manome ny fitaovana ampiasaina amin'ny asan'ny sary an-tsaina. Ny fehilaha mazava dia mampiseho ny tokony hatao ny adin-tsaina. Ny foibem-pianarana I-am dia manome ny maha-izy azy sy ny maha-izy azy amin'ny asan'ny fisainana. Ny fisaintsainana dia toe-tsaina, ary tsy amin'ny saina. Ny asan'ny sary an-tsaina dia atao ao an-tsaina alohan'ny hifandraisany amin'ny fahatsapana an-tsaina ary alohan'ny hiantsoana ny saina dia hanome fanehoana an'izao tontolo izao amin'ny zavatra izay natao tamin'ny alàlan'ny sary an-tsaina. Toy izany ny toe-tsaina misy sary an-tsaina. Na izany aza, tsy maintsy mahatsiaro fa ilay mazàna hoe antsoina hoe fakana sary dia tsy eritreritra mihitsy akory. Izay midadasika ary tsy misy ny fahatakarana ny dikan'ilay teny antsoina hoe fakana sary dia ny filalazana ny saina ao an-tsaina, na, amin'ny ambaratonga ambony, ny fiasan'ny saina rehefa teren'ny saina tsindraindray ny faneriterena azy na hanaitra ireo zavatra izay manome fahafinaretana amin'ny an-tsaina sy hanomezana fahafinaretana vaovao na olana izay nasehon'ny feon-tsofina ary nampiditra ny saina. Amin'izany toe-javatra izany, izay sary an-tsaina diso, ny fahaizan'ny saina fito dia mihetsika amin'ny alàlan'ny foibem-pikarohana; fa ireo fanakorontanana ireo dia fialan-tsasatry ny fahaizana hafa amin'ny alàlan'ny mpampianatra fakana ary tsy asan'ny talem-pianarana. Ny fakantsary fifantohana irery dia ny fahaizan'ny saina izay mifandray mivantana amin'ny atidohan'ilay lehilahy salanisa. Ny sampam-pianarana enina hafa dia tsy mifandray amin'ny raharaha. Ny ataon'izy ireo dia alaina amin'ny alàlan'ny foibem-pikarohana.
Mba hahatakaranao tsara kokoa hoe inona ny eritreritra, izany hoe ny tena fisainana - dia tokony ho jerena ny eritreritra diso. Ny fiheverana diso dia tsy fiheverana an-tsaina ny fahaizan'ny saina, fa ny fihetsiky ny mpampianatra iray, ny foibem-paritra afovoany fotsiny, izay manaitra ny sain'ny olona ary rehefa manelingelina dia miteraka fikorontanana amin'ny ambaratonga enina hafa na ny sasany amin'izy ireo.
Tsy tena atao an-tsaina akory ny fanoherana, nofy andro, volana. Ny famerenana ireo endrika sy endrika manodidina ny natiora dia tsy fiheverana. Ny fandikana ny asa, na natiora izany na an'ny olombelona, ​​dia tsy fiheverana akory, na dia mahay manao izany aza izy. Ny fisainana an-tsaina dia famoronana. Ny asa rehetra misy sary an-tsaina dia famoronana vaovao. Ny fakana sary an-tsaina dia tsy mandika ny natiora. Ny natiora dia tsy aseho ny saina ny fomba fanaovana ny asa sain-tsaina. Ny fakana sary an-tsaina dia manome ny natiora amin'ny endriny rehetra sy ny lokony ary ny feo ary ny lafiny maro samihafa. Ireo dia voajanahary amin'ny saina fa tsy amin'ny natiora.
Ny mamboly fisainana - izany hoe, ny toe-tsaina izay misy ny fakana sary, ny foto-kevitry ny antony manosika, ary ny foibem-paritra mifantoka dia mirindra sy manatanteraka ny asany amin'ny firindrana, raha ny fakana ny maizina dia voafetra na voaroaka, ary ny fahaizana telo hafa , ny firafitry ny fotoana, ny hazavana jiro ary ny mpampianatra I-am no mandray anjara amin'ity asa ity - ilaina ny mahatakatra ny rafitra voalaza eto, izay no rafitra iray ihany izay manome saina ny fiasan'ny saina.
Ny dingana faharoa dia ny fananana foto-kevitra fisainana, ary ny dingana manaraka dia ny fampiasany ny fakantsary ny sary mifanaraka amin'ny mazoto mivezivezy sy ny mpampianatra fakantsary. Ilay mpanontany no tiana holazaina ireo lahatsoratra roa momba ny sary an-tsaina izay nipoitra tao amin'ny famoahana NY Mey sy Jona tamin'ny 1913. Raha ny mombamomba ny saina, ny fampahalalana dia azo jerena ao ilay lahatsoratra, "Ekeko, Master, ary Mahatmas,"natonta ao amin'ny TENY ao amin'nyAprily, Mey, Jona, Jolay, ary Aogositra, 1910.